ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အသုံးပြုသူခရီးသည်များအား အသိပေးချက် – Burmese Online News
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) မှ စတင်၍ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဆောက်အအုံ ရှေ့ရှိ ယာဉ်လမ်းများတွင် လိုက်ပါပို့ဆောင်/ကြိုဆိုသော မော်တော်ယာဉ်များအား ခရီးသည်အတင်/အချအသုံးပြုခြင်း (Pick-Up and Drop Off Only) စနစ်ကို ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ လေဆိပ်ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ စတင်ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစနစ်အရ ခရီးသည်ပို့ဆောင်/ကြိုဆိုသော (ခရီးသည်အတင်/အချပြုလုပ်သော) မော်တော် ယာဉ်များအနေဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဆောက်အအုံများရှိ သတ်မှတ်နေရာများတွင် ခရီးသည်များအတင်/အချပြုလုပ်ရန်သာ ခေတ္တရပ်နားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကြာမြင့်စွာ ရပ်နားစောင့်ဆိုင်းထားသော မော်တော်ယာဉ်များအား တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲများမှ ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရ စစ်ဆေးအရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အဆောက် အအုံများရှေ့ရှိ ယာဉ်လမ်းကြောများတွင် ယာဉ်သွားလာမှု ပိုမို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားသော စနစ်သစ်အား ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် အသုံးပြုသူခရီးသည်များအနေဖြင့် သတိပြုမိကြစေရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန် အသိပေးအကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဆောက်အအုံအရှေ့နှင့် ပြည်တွင်းလေဆိပ်အဆောက်အအုံဘေးတွင် ရှိသော ကားရပ်နားရာနေရာများတွင် ရပ်နားနိုင်ပါသည်။ ယာဉ်ရပ်နားမှုအတွက် မိနစ်သုံးဆယ်အထိ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံမည်မဟုတ်ဘဲ မိနစ်သုံးဆယ် ကျော်လွန်ပါက သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
//Terminal 1 ရှိ သတ်မှတ်ဧရိယာများ//
ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရန် – ဂိတ်အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃ နှင့် ၄
ခရီးသည်ကြိုဆိုရန် – ဂိတ်အမှတ် ၅၊ ၆၊ ၇ နှင့် ၈
//Terminal3ရှိ သတ်မှတ်ဧရိယာများ//
ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရန် – ဂိတ်အမှတ် ၁၊ ၂ နှင့် ၃
ခရီးသည်ကြိုဆိုရန် – ဂိတ်အမှတ် ၄
To all our valued passengers:
Please be advised that the Airport Traffic Management Committee of Yangon International Airport will be launchinganew “Pick-Up and Drop Off Only “System effective on Monday, 18 November 2019.
Under this system, ALL vehicles will only be allowed to pick up and drop off passengers on designated points at YIA’s terminals and waiting for passengers inaprolonged period will not be permitted. Failure to comply will result in penalties from the Traffic Police according to the traffic rules.
We encourage the public to observe and cooperate with the new system for the smoother flow of traffic at the curbside areas at all terminals.
Parking is available at car parks opposite International Terminal and beside Domestic Terminal. Please note that the first 30 minutes are complimentary, however, full parking charges apply beyond 30 minutes.
//Designated points at Terminal 1//
Drop-offs // curbside of gate 1,2,3 and 4
Pick-ups // curbside of gate 5,6,7 and 8
//Designated points at Terminal 3//
Drop-offs // curbside of gate 1,2 and 3
Pick-ups // curbside of gate 4
Credit -> Aung Myittar